MW CMC Oo Kahadlay Qalabka Mishinariyada Culculus - Cakaara News
MW CMC Oo Kahadlay Qalabka Mishinariyada Culculus
Jigjiga (CN) Arbaco, 30 December, DDSI oo soo iibsatay qalab ka Mishinariyada culculus ee casriga ah oo tiradoodu dhantahay 86 mishiin kuwaasoo isagu jira 15 loader 15 Scavater 13, Douser 15,Dum-truckers iyo waliba 30 qabaal oo kuwa dheereeya ah.
Hadaba, Madaxwaynaha DDSI Mudane Cabdi Maxamud Cumar oo maanta indho indhayn utagay qalabkan deegaanku soo iibsaday ayaa sheegay in qalabkan ay lacag faro badan ku baxday islamarkaana ujeedadiisu tahay in shacabka noloshooda wax lagaga badalo iyadoo looga faa iidaysan doono biyo uruurinta Toga Faafan, waxa uuna Madaxwaynuhu intaa kudaray in qalabkan lagaga shaqayn doono mashaariicda ay xukuumadu fulinayso ee biyo xidheenada kala ah Baka, Goomaar iyo Maraacato, islamarkaana ay lagama maarmaantahay in shaqada ay bilaabaan bari.
Sidookale waxa uu madaxwaynahu tilmaamay in 68 dagmo & Afarta Maamul Magaalaba ay kasocdaan dhismo biyo xidheeno qalabkoodiina ay haystaan. Waxa uuna hadalkiisi ku gabagabeeyay Madaxwayne CMC in baahida deegaanku ay intaan ka balaadhan tahay islamarkaana qalabkale oo kan lamida uu soo socdo.
Sidookale booqashada indho indhaynta qalabkan mushiinada waxaa kahadlay Wasiirka Xafiiska Hormarinta Waraabka iyo Dooxooyinka DDSI Mudane Suldaan Maxamed Xasan oo sheegay in qalabkan faa iido balaadhan uleeyahay islamrkaana loogu talagalay afarta biyo xidheen, waxa uuna hadalkiisu kudaray in mar hore shaqooyinkii la sii bilaabay oo lasameeyay goobihii ay shaqaaluhu dagi lahaayeen. Waxa uuna hadalkiisi ku gabagbeeyay masuulku in aad ay ugu mahadsanthay xukuumadu soo iibinta qalabkan faraha badan aadna ay bulshadu ugu riyaaqi.